घरमाश्रीमती हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुल्ने को ? …म पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ त ? - Purbeli News
घरमाश्रीमती हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुल्ने को ? …म पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ त ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २६, २०७४ समय: १९:४५:२६
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुल्ने को ? ‘फोर जी’को जमनामा ब्रत बसेर भर्जिन पत्नि पाइन्छ भनेर कोही भगवान आएर मेरो कानमा सुनाए भने राम–राम म एक महिनासम्म पानी पनि नपिइ ब्रत बस्ने थिएँ ।’एकजना युवकको यो स्टाटस पढेर मनमा धेरै कुरा उम्रिए । दिमागमा कुरा खेलेपछि कलमको साहारा लिन बाध्य भएँ । मनमा कुरा खेलेपछि केही नलेखी बस्नै सकिएन । एउटी केटीले पुरुषलाई होच्चाएर केही शब्द लेख्यो भने बुरुक्क उफ्रिने जमात, पुरुषकै यस्ता कुरामा ‘हो मा हो’ जनाउँछ । आजका केटी भर्जिन् छैनन् भन्ने आशय राख्नु भन्दा पहिले आजसम्म तिमीले कतिवटा केटी खेलायौ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी ठान्ने कि ।
किनकी, श्रमितिमा भर्जि्निटी खोज्नु आफैँमा कुण्ठा र ढोंग हो । सामाजिक संजालमा दैनिक रुपमा सार्वजनिक भइरहने यस्तै प्रतिक्रियाले महिला–पुरुषको दूरी बढाउनुका साथै समाजलाई असहिष्णु बनाउँदै लैजान्छ । तर महिलालाई सम्मान गर्न नजान्ने ‘सेक्सिस्ट’ पुरुषहरु यस्ता गम्भीर विषयमा कहिल्यै उदार भएर सघन बहस गर्दैनन् । बरु कुण्ठा र ढोंगले भरिएका बिचार फेसवुकमा पोख्छन् ।पुरुषले झैँ कुनै युवतिले पनि आफ्नो श्रीमान विहेअघि भर्जिन होस् भन्ने सर्त राखी भने के हुन्छ ? भर्जि्निटीबारे पुरुष जे सोच्छन् त्यो सोच नै निकृष्ट लाग्छ । अत्याधुनिक दुनियामा भर्जि्निटीबारे सोच बनाउने कुरामा सबै उदार बन्नैपर्छ । ति पुरुषलाई सोध्नुछ, ‘ओ सेक्सिस्ट पुरुष ! तिमीले विहेको लागि भर्जिन युवति खोजे झैँ, म पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ ?’ के जवाफ दिन्छौ यस्तो सोध्दा ?
तर यस्तो सस्तो कुरामा बिचार अल्झाउनु छैन मलाई । प्रेम, यौन, विवाह जस्ता प्रकृतिक र सांस्कृतिक पक्षहरुबारे अलि फराकिलो दायरा बनाएर हेर्नुपर्छ । पक्कै पनि समाज बदलिँदैछ । यस्ता विषयमा हेरिने दृष्टिकोण फेरिएको अवस्य छ । यद्यपी कुण्ठाले भरिएका ‘सेक्सिस्ट’ पुरुषहरुको सोचले गर्दा पुरुषसत्तालाई थप मलजल पुर्याएको तितो यथार्थ अझै छ । साभार -सविता सापकोटा यो लेख हामीले HDनेपाल बाट लियका हौ |
आलम पाकिस्तानी एजेन्ट भएको भारतको दाबी, जानकार भन्छन् : झुटो आरोप लगाइयो
थाहा छ ? यस्ता छन् भियाग्राका गम्भीर असरहरु
मालदिभ्समा नेपाली युवतीको मृत्यु
बिहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् : तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको हुनेछैन कमी
पत्थरीबाट जोगिन नभुलेर गर्नुस् यी ७ काम
सावधान! पातलो सिरानीले नशा च्यापिन सक्छ !
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन ०६ गते शनिबार
सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ती दिने सहमती भएपछि आलमको शव परिवारले बुझे